Ikhaya Lomndeni Elihle Elinokubukwa Kwasolwandle - I-Airbnb
Ikhaya Lomndeni Elihle Elinokubukwa Kwasolwandle
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Robbie
Leli khaya elihle "elihlangene" lihlelwe phezulu egqumeni futhi linombono omuhle wendawo endala ye-lagoon. Cabanga uhlezi ku-verandah ubuka ilanga lingena oLwandle lwase-India. Leli khaya elihlelwe kahle lingamangalisa ekuvakasheni okuthandekayo kwabantu ababili, noma ukuhlangana kwemindeni
eminingi nabangane. https://www.facebook.com/hackneybeachhouse/
Kunamakamelo okulala amane negumbi lokugezela elilodwa endlini enkulu kanti Ikamelo lokulala 5 liyifulethi eliyisitolo eliyisitezi eliphelele elinegumbi lokugezela. Yonke imibhede yenziwa ngelineni yekhwalithi futhi kunamathawula amaningi amahle antofontofo, namathawula asebhishi uma unquma ukuthatha uhambo lwemizuzu emihlanu oluya ebhishi.
Indawo yangaphandle ilungiselelwe kahle ezokuzijabulisa nendawo enkulu kakhulu yokushisa inyama. Uma uthanda ukupheka ngaphakathi kunompheki ongu-900mm ophekela igesi kanye nesikhala esikhulu se-counter esitsheni esimhlophe esipholile. Ungathanda amakhambi ambalwa okupheka ngawo? Zizwe ukhululekile ukuphuma ngaphandle bese uzikhetha nje ezingadini. Kukhona i-rosemary, i-mint, amaqabunga e-bay amasha, isihlahla se-kaffir, kanye nezitshalo eziyingqayizivele ze-tucker!
Uma ungumuntu olunguzayo, ayikho inkinga, kodwa sicela wenze lokhu ngaphandle kuphela! Kukhona ama-ashtrays anikeziwe.
Igceke livalelwe ngokuphelele ukugcina abangane bakho abanoboya bephephile futhi kukhona umnyango wesilwane esifuywayo wokubanikeza ukufinyelela noma kuphi lapho ulenga khona (umthetho wendlu oqinile uwukubagcina bengekho efenisheni!)
Uma kungesona isimo sezulu sokubhukuda khona-ke ungakwazi ukunethezeka phambi kwesisu sembiza eyenziwe ngamapulangwe futhi ubheke nje iziphepho eziphisa olwandle.
Kukhona imithwalo ongayenza ukuzungeza isifunda nakho konke ubulula bokuthi ube seduze uma usuka
esikhungweni sokuthenga. https://www.facebook.com/hackneybeachhouse/
I-Yanchep inamabhishi amahle phansi nje komgwaqo egcekeni lakho elingaphambili kanye ne-National Park engekho kude egcekeni lakho elingemuva. Jabulela ikhefu lokutshuza eliseduze. Kukhona indawo yegalofu yomgodi yomhlaba wonke engu-18 eseduze futhi i-Mbili Rocks marina isemgwaqweni.
Kukhona ibhokisi lesikhiye endlini uma ufuna ubumfihlo bakho, kodwa uma ungathanda ukuhlangana futhi uboniswe indawo, khona-ke siyakujabulela ukwenza lokhu. Siphila imizuzu engu-30 kuphela uma
Kukhona ibhokisi lesikhiye endlini uma ufuna ubumfihlo bakho, kodwa uma ungathanda ukuhlangana futhi uboniswe indawo, khona-ke siyakujabulela ukwenza lokhu. Siphila imizuzu engu-30…